Russia inovhara yakavharidzirwa email mupi ProtonMail | Linux Vakapindwa muropa
Russia inovhara yakavharidzirwa email mupi ProtonMail
Mushure mekuvharwa kweTeregiramu, ikozvino hurumende yeRussia yabvunza kune main Russian telecom vanoshanda, MTS uye Rostelecom, izvo zvinomanikidza kukiya pane yakavharidzirwa email mupi ProtonMail.
Lock iri akarairwa nehurumende federal security service, yaimbove KGB, iyo yakawana ndokupa nzira yekutonga mushure mekunge agency yapomera kambani iyi nevamwe vatengesi.
1 Ndechipi chikonzero?
1.1 Russia, nyika iri kuda kuve yakasarudzika
Iyo email server yakagadzirisa kupararira kwekutyisidzira kwebhomba, sekutyisidzirwa kwakawanda kusingazivikanwe kwebhomba kwakatumirwa neemail kumapurisa mukupera kwaNdira, kumanikidza kubviswa kwezvikoro zvinoverengeka nezvivakwa zvehurumende.
Pakazara, yakavharira 26 kero dzeInternet, kusanganisira akati wandei maseva anoshandiswa kunyorera vashandisi magumo ekubatana neTor, isingazivikanwe network inozivikanwa nekudzora censorship.
Vakabvunzwa internet vanopa rubatsiro vanoshandisa blocking "pakarepo", uchishandisa nzira inonzi BGP Blackholing, iyo inobvumidza ma internet ma routers kungobvisa internet traffic panzvimbo yekuifambisa iyo kwainosvika.
Kune rimwe divi, CEO weProtonMail, Andy Yen akataura zvinotevera:
ProtonMail haina kupunzika zvakajairika, iri kumbonyanya kusanzwisisika. Ivo vanovhara kupinda kune ProtonMail mail maseva.
Saka mazhinji mamwe maseva emaRussia, semuenzaniso, haachagone kutumira maProtonMail maemail, asi mushandisi weRussia haana dambudziko kuwana yavo inbox.
"Mass blocking yeProtonMail nenzira inokuvadza vese vagari veRussia vanoda kuchengetedzeka kwepamhepo."
Yakawedzera kuti sevhisi yayo yaipa kuchengetedzeka kukuru uye kunyorera kupfuura mamwe makwikwi emameseji munyika.
Isu takaisawo matanho ehunyanzvi ekuona sevhisi yekuenderera kune vashandisi vedu muRussia uye tafambira mberi zvakanaka munzvimbo ino. Kana paine kunyunyuta zviri pamutemo, tinokurudzira hurumende yeRussia kuti itarise patsva mamiriro ayo uye igadzirise nyaya idzi maererano nemitemo yenyika pamwe nemaitiro epamutemo.
Yen akaenderera mberi achiratidza kuti kukiya kwakaenderana nekuratidzira kurwisa kuedza kwehurumende kurambidza Internet, iyo vatsoropodzi vakatsanangura se "switchization switch."
Russia, nyika iri kuda kuve yakasarudzika
Gore rapera, paramende yeRussia yakatora mutemo unoda kuti maRussia vanopa mainternet services vape rusununguko rusununguko rweinternet nzvimbo (Runet), kuitira kuti ugone kudimbura nyika kubva kune imwe nyika.
Sechikamu cheichi chakakosha shanduko yehunyanzvi, Makambani ekufambisa mafoni eRussia anofanirwawo kumisikidza "hunyanzvi nzira" kutsausa ese Internet traffic kubva kuRussia kuchinjana mapoinzi akatenderwa kana kupihwa neRoskomnazor, iyo Russian telecommunication kambani.
Ndiro basa remuviri uyu, mutero wekutarisa traffic kuvharira zvakarambidzwa zvemukati uye kuona kuti traffic pakati pevashandisi veRussia inoramba iri mukati menyika.
Kuverengwa kwechipiri kwakarongerwa mwedzi uno, mushure meizvozvo, kana ukapasiswa, bhiri iri rinofanirwa kusainwa neImba yepamusoro yeParamende uyezve neMutungamiri Vladimir Putin.
Muna Zvita 2018, maSeneta Andrei Klishas naLyudmila Bokova, pamwe neMutevedzeri Andrei Lugovoi, vakaunza bhiri rekugadzira matanho ekudzivirira eInternet muRussia.
Russia, pamwe neIran neNorth Korea, inopomerwa mhosva yekurwisa uye nyika dzeNATO dzakazivisa dzadzokororazve kuti dziri kufunga mhinduro yakasimba kuma cyberattacks ayo Russia inogara ichipomerwa.
Svondo rapfuura muRussia, zviuru zvevanhu zvakaungana muMoscow nemamwe maguta maviri kuratidzira vachiramba nemitemo yenyika iri kuwedzera kurambidza internet., izvo zvinonzi nevamwe zvinozotungamira kumisidzana nekuparadzanisa nyika nenyika.
Zvakanaka hatisi kure nezviri kuitika kuNorth Korea. Kuratidzira uku kukuru mumaguta aya kwakarongwa mushure mekunge imba yepazasi yeparamende yatambira bhiri mwedzi wapera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Russia inovhara yakavharidzirwa email mupi ProtonMail